Ibali likaBuddhist ary ➡️ Fumana kwi-Intanethi ▷ ➡️
Siza kugxila kwinqaku elilandelayo ukukuxelela ukuba lisetyenziswa njani irosari UmBhuda. UbuBuddha bunazo, njengezinye iinkolo, iinkqubo ezithile kunye namasiko avunyelweyo ukunxibelelana ngokomoya.
1 IRosari yamaBuddha, indlela yokudibanisa ngokomoya
2 Injani kwaye uyisebenzisa njani?
2.1 Iimpawu zeRosari yamaBuddha okanye iJapa Mala
IRosari yamaBuddha, indlela yokudibanisa ngokomoya
Njengonqulo oluninzi, ngaphakathi kobuBuddha kukho isixhobo esenziwa ngabantu abazinikeleyo kunqulo olukhulu, iRosari yamaBuddha okanye eyaziwa ngokuba yiJama Pala. Kuthathwa njengomntu obaluleke kakhulu ukugcina umkhondo wokuphindaphindwa kwamagama amandla ngaphakathi kokucamngca.
UbuBuddha, obuthathwa njengenkolo yesine ebaluleke kakhulu emhlabeni, baziwa njengenkolo engeyiyo eyonqulo, oko kukuthi, yinkolo apho kungekho thixo, nangona kunjalo, ikholelwa kwizinto zobuthixo nakwimisinga yokomoya.
Le nkolo izama ukufundisa nokubonisa ukuba kukho isisombululo somoya kwezo mbandezelo abantu abanokujongana nazo kubomi babo bemihla ngemihla ngokusekwe kwiimfundiso zikaSiddharta Gautama, owaziwa njengoBuddha.
Ifilosofi elawula ubuBuddha inxibelelene nenkolo kunye nokuziphatha okusekwe eIndiya ngenkulungwane ye-XNUMXth BC. C kaBuddha. Kuyaziwa ngokungaziphathi iimfundiso kuba injongo yazo kukususa ezo ngcinga okanye iimvakalelo zokungoneliseki engqondweni, ikwacebisa iikhonsepthi zokuzalwa ngokutsha komntu ukuze zikhulule kwimbandezelo zangaphakathi.
Kwangokunjalo, izikolo zobuBuddha zihlala zizama ukukhokelela umntu kwindlela yenkululeko, ke ngoko, xa kwabelwana ngenjongo yokoyisa ukubandezeleka, kufuneka kunxibelelene nokucamngca. IRosari yamaBuddha isetyenziswa ikakhulu kwizikolo zaseTibetan ukucengceleza amazwi aphindaphindwayo, oko kukuthi, igama lesiSanskrit elijolise ekuphumleni kwaye lenze umntu lowo ukuba acamngce.
Kwimbali sihlala siqaphela ukuba kukho izixhobo ezisivumela ukuba sinxibelelane ngokomoya namandla, kwaye zinexabiso elikhulu lokomfuziselo. Imvelaphi yeRosari yamaBuddha ibuyele kwiminyaka engama-6000 eyadlulayo.
Injani kwaye uyisebenzisa njani?
I-rosari yamaBuddha isetyenziselwa ukugcina umkhondo wokuphindaphinda kwemantra ukutsala vibes elungileyo. Kuya kufuneka usebenzise uxinzelelo oluphezulu kwaye uhlale ucacile ukuba yeyiphi intsingiselo esifuna ukuyinika into esishukumisayo okanye into esifuna ukuyiphumeza ngalo mkhuba.
Iimpawu zeRosari yamaBuddha okanye iJapa Mala
Umthi osetyenziselwa ukwenza iirosari zamaBhuda wenziwe ngokukrola Ukuba sisixhobo esisetyenziswe ngaphezulu kweminyaka engama-3000 ihlala isisithethe sokufumana iirosari eziqoshwe ngomthi, njengoko iyeyona ndlela ilula yokwenza, eyona nto yayikukusebenzisa izinto ezilula.
Umsonto ngokubanzi wenziwe nge-9 okanye i-3 yemicu yomntu ngamnye, kukho umahluko ophawulekayo xa wenziwe ngemicu emi-3, oko kuthetha ukuba ibonisa ubucwebe bamaBuddhist kathathu. Injongo ephethweyo, imfundiso abayifundisayo kunye noBuddha, ngokuchaseneyo, xa bethetha ngemicu eli-9 kubhekiswa kuBuddha nabafundi bakhe abasibhozo.
Isacholo somqala senziwe ngamaso ali-108 kwaye siqulathe esikhulu ekuthiwa yiGugu; Ngesi sizathu, xa isetyenziswa kufuneka iphathwe ukusuka kwindawo yokuqala kwaye xa ibuya, kubalulekile ukuqonda ukuba umjikelo we-108 yemithandazo yemantra ugqityiwe. Kuya kujikeleza kwi-axis yayo xa ufuna ukuphinda ufunde.
Iiakhawunti ezintlanu zokuqala zichaziwe njengezidibene nezivamvo ezintlanu zomntu; ukuva, ukubona, ukungcamla, ukubamba kunye nevumba. Owesithandathu yinto edibene nengcinga, eyesixhenxe yindawo yangaphakathi ezimeleyo, kwaye eyesibhozo ngamandla e-karma. Ukuba uyalithanda inqaku, ndiyakumema ukuba ufunde: «Umthandazo kumama oswiti«. Ndiyazi ukuba uza kuyithanda kwaye uza kufumana idatha eninzi.
Ukucamngca kubhekisa kwindalo ebanzi yeendlela apho kukhuthazwa khona ukuphumla, kunye nokwakha amandla angaphakathi okanye amandla obomi. Ukucamngca kunciphisa uxinzelelo kwaye kuthathwa njengoluhlobo lweyeza elincedisayo elinceda ingqondo nomzimba.
Ukucamngca ngengqondo, ngaphezu kwako konke, kunokuphucula ubuhle bokunkqaya kunye nokuyila, yiyo loo nto kubaluleke kakhulu ukulawula ukukhokela ubomi obupheleleyo.
KwiBuddhism, ukucamngca kukuziqhelanisa nokugqwesa, kuba ifuna ukuzimisela apho ugqirha azibeka khona ngokwenyani kwaye andise ubulumko bakhe. Isebenza njengesixhobo sokusombulula nasiphi na isihlanganisi esihlanu, oko kukuthi, ukusombulula ezo ntlungu zixhomekeke ebantwini xa zinika ukubaluleka kumdibaniso, nokuba kukwimo nomzimba, imvakalelo, icandelo lengqondo okanye ngaphakathi kwezingqondweni. .
Ukufikelela kwindlela yenkululeko, kuchaziwe ukuba kuya kufuneka uphathe iindlela ezahlukeneyo zokomoya kunye neemodeli kwizithethe ezahlukeneyo zolo nqulo, ke ngoko, kulula ukudibanisa nale nto ngeRosari yamaBuddha, kuba injongo yokuyiphatha kukujonga ingqondo kwinto.
Izama ukunqanda iziphazamiso ezibangelwa yimeko-bume esingqongileyo, ngeli xesha sifezekisa ingxinano enkulu engenakuphikiswa. Yiba nolawulo olugqibeleleyo lwayo yonke into esijikelezileyo.
Izibonelelo ezibonelelwa zezi zinto ziya kukunceda uqinise uqeqesho, kuba oko kubizwa ngokuba kukungaphazamisi yindlela amaBuddha exesha elidlulileyo afuna ukuyifundisa ukukhanyisela okwangoku kunye nezo kufuneka bazifundise kwikamva.
Irosari iyigugu lokomoya kunye nento engcwele, enxibelelana nobuthixo, isithethe samaHindu sijonga ukuba ukusebenzisa irosari rhoqo kunokutsala amandla kwaye ufumane ukhuseleko.
I-rosari sisixhobo esiphambili sokufikelela kugxino kunye nokuzinza okuzinzileyo, apho umphefumlo unokuxhuma ngokuchanekileyo. Umbono kukuba unokuzola ingqondo yakho kwaye ufikelele kwimeko yokukhanyiselwa.